Ficilladan 6-da ah waxay maalin kasta kordhinayaan farxaddaada | Wardeeq 24 TV
Home Barnaamij-yada Ficilladan 6-da ah waxay maalin kasta kordhinayaan farxaddaada
Ficilladan 6-da ah waxay maalin kasta kordhinayaan farxaddaada
Farxadda way kala duwan tahay, mararka qaarna waxay noqon kartaa shucuur iska kooban ama dhibaato-wanaagsan oo nagu qasbeysa in aad eegno dhanka fiican ee nolosheena oo keli ah.
Haddaba, dulqaadka waa inaan ka barano in farxadda aysan ku koobnayn dhaldhalaalka nolosheena iyo jirkeena, balse ay ku xiran tahay aasaaska xaalado wanaagsan.
Haddaba, halka ka baro arrimaha maalin kasta kordhin kara farxaddaada iyo iftiinka noloshaada:
1- Dadka kale caawi
Waa arrin aad u wanaagsan in aad wax bixiso halkii lagu siin lahaa. Dadka badankooda waxay jecel yihiin in xaaladda noloshooda ay barbardhigaan caalamka, taasna waxay dhaaweceysaa sida dhabta ah ee marxaladda ay tahay.
Dunida way ka badan tahay khibradda nolosheena, waxaana ka mid ah in dhibaatada ku haysato ay mid ka badan haysato qof kale. Haddaba, caawinta waxay kaa qaadeysaa dhibka – Sadaqada waxay ku anfeceysaa adduunyo iyo aakhiro.
Waxaad sameyn kartaa in aad dhiig sadaqeysato, qof miskiin ah aad ku caawiso qabashada shaqo (si bilaash ah), Cunto intaad gurigaaga ku kariso ayaad u qeybin kartaa masaakiin. Waxaad caawin kartaa qof deriskaaga ah oo xanuunsan.
Muhiimadda waxay tahay in aad maalintaa xal u hesho dhibaato haysata qof, ama aad hormariso oo xoojiso nolosha qof kale.
Taas waxay keeneysaa in aad farxad dareento maalintaas oo dhan, dadka kalena aad ka farxiso.
2- Ficillo naxariis ah oo lama filaan ah samee
Ficillo iska fudud oo naxariis ah, sida sadaqo, jaceyl iyo u nixitaan qof dhib haysto, iyo ka farxinta qof, dhammaan waxay keenaan farxad maalinle ah.
Farxadda waa dhiirogelin iyo faafinta dhoollacadeynta iyo is jaceylka ee nolosha.
In aad qof u naxariisato kuma koobna in aad cunto siiso mid gaajeysan, balse waxay noqon kartaa in qof aad ka bixiso lacag loo haystay, in aad qof kuu adeegday oo maqaayad ka shaqeeya aad lacag yar siiso, in qof waayeel ah ka caawiso in wada ay gooyaan iyo wixii la mid ah.
Maalin kasta, waxaa jiro fursado badan oo aad oo ficil naxariis ah aad ku sameyn karto – ma ahan wax hal arrin ku kooban.
3- Lacag keydso ka hor inta aadan isticmaalin
Isticmaalka lacagta ee aan xadka lahayn waxay sababi kartaa in dhaqaale xumo ay ku soo wajahdo ka dibna aad dareento murugo – taas waxay dhibaato ku noqoneysaa farxaddaada.
Keydka wuxuu ku anfacayaa marka aad baahida badan qabto, sida xilliga bixinta kharashaadka iskuulka carruurta, marka aad cisbitaal u baahato, haddii safar degdeg ah uu ku soo galo iyo arrimo la mid ah.
Haddaba, manta ka fikir sidii aad lacag u kaydsan lahayd. Wax meel dhigashada ma ahan in aad sameyso ka dib marka aad bixiso kharashaadkii aad u baahnayd, Balse waa in aad meel wax dhigato ka hor inta aadan isticmaalka billaabin.
4- Maasiiniyad maalinle iyo sannadle ah sameyso
Marka aad og tahay kharashka kugu baxaya si maalinle ama bille ah, waxaad ka qaadeysaa farxad, sababtoo ah, waad hubtaa waxa aad u baahan tahay iyo inta kaa soo hareysa. Miisaaniyadda waa faa’iido joogto ah.
Sidoo kale, waxay kaa caawineysaa in aadan isticmaalin lacag ka badan inta ku soo gashay. Farxadda ma ahan in aad lacag u baahan tahay oo aadanna haysan, balse waa in aad og tahay baahidaada iyo kharashka kugu baxaaya inta uu gaarayo.
5- Xisaabo faa’idada aad haysato ee nolosha
Inta aadan eegin qof haysat wax badan – dhaqaale, hanti, gawaari – waxaad eegtaa midka kaa hooseeya ee adiga kaa sii baahi badan. Taas waxay kaa caawineysaa in aad aragto wax wanaagsan ee Alle uu ku siiyay.
Farxadda waxay ka dhalataa in aad ku qanacdo waxa aad haysato, Alle na ugu mahdiso. Qanaacada waa awoodsiiyaha farxadda.
6- Dheh “haa” si layaab oo lama filaan ah
Ma jiro qof jecel in laga dhaqaajiyo meesha uu jecel yahay ama ku faraxsan yahay, balse “in aad haa dhahdo oo ogolaato” qabashada waxyaabo cusub ama aadidda meel cusub, waxay ballaarineysaa khibradda nolosha.
Magaalo cusub u safar, meel cusub shaqo ka bilow, dad cusub baro – waxaad noqoneysaa qof wax kasta la qabsan karo oo yeesha saaxiibbo cusub.
Waxyaabaha cusub marka aad barato ama la qabsato, waxaad dareemeysaa farxad. Xitaa haddii aad meeshii horey aad u joogtay aad ku qabtay dhibaato, waxaa suuragal ah meesha cusub ay soo celiso farxaddaada.
Haddaba, naftaada u fur in aad ogolaato loolanada cusub, adigoo farxad sii muujinaya – Waxaad si degdeg ah u uruursan doontaa dhammaan farxadda.
Previous article6 waxyaabood samee marka aad si xad dhaaf ah u dharagto
Next article8 Faa’iido oo cajiib ah oo cambaha laga helo – boqorka khudaarta